तपाईँले ट्विटरबाट पठाएको 'डिरेक्ट म्यासेज' तेस्रो पक्षलाई त गएन ? चेतावनीयुक्त सूचना जारी - Technology Khabar
» तपाईँले ट्विटरबाट पठाएको ‘डिरेक्ट म्यासेज’ तेस्रो पक्षलाई त गएन ? चेतावनीयुक्त सूचना जारी
Technology Khabar ६ आश्विन २०७५, शनिबार
काठमाडौं । सोशियल मिडिया ट्विटरले प्रयोगकर्ताहरुलाई चेतावनीयुक्त सूचना जारी गरेको छ । ट्विटरले प्रयोगकर्ताहरुको एकाउन्टबाट सिधै पठाएको म्यासेज तेस्रो पक्षलाई गएको भन्दै चेतावनीयुक्त संदेश जारी गरेको छ ।
कम्पनीले शुक्रबारदेखि प्रयोगकर्ताहरुलाई सूचना जारी गर्दै यूजरको निजी म्यासेज(डिएम) तेस्रो पक्ष डेभलपरहरुलाई गएको भन्दै सचेत गराएको छ ।
ट्वीटरकाअनुसार सो समस्या २०१७ मई महिनादेखि देखिएको र सो समस्यालाई तत्कालिन समयमा नै समाधान गरिएको थियो । ‘हाम्रो अनुसन्धान निरन्तर जारी छ, तर अहिलेसम्म अनधिकृत डेभलपरलाई गएको डिरेक्ट म्यासेजको दूरुपयोग भएको हामीसँग कुनै जानकारी छैन,’ ट्विटरले भनेको छ ।
ट्विटरले प्रयोगकर्ताहरुका लागि चेतावनीयुक्त संदेश पठाएपनि त्यस्तो सूचना हाल ब्राण्डसँग सम्बन्धित एकाउन्टहरुमा मात्र पठाईएको छ । उदाहरणको लागि एयरलाइन्स अथवा डेलिभरी सर्भिस जस्ता ब्राण्ड कम्पनीहरुको ट्विटरमा मात्र जानकारी दिएको छ । उनीहरुको एकाउन्ट संभवत प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।
ट्विटरकाअनुसार केबल एउटा टेक्निकल गतिबिधिमा मात्र यस्तो समस्या आएको छ ।
प्रयोगकर्ताहरुको डिएम (direct message)तेस्रो पक्षलाई पठाउने बग सेप्टेम्बर १० तारिखमा नै भेटिएपनि कम्पनीले प्रयोगकर्ताहरुलाई भने २ साता पछि मात्र सूचना दिएको छ ।
‘यदि तपाईँको एकाउन्ट प्रभावित भएको थियो भने हामी तपाईँलाई सिधै इन-एप नोटिस पठाएर वा ट्विटर डटकममा नोटिस दिएर सम्पर्क गर्नेछौं,’ कम्पनीको सूझावमा भनिएको छ ।
कम्पनीकाअनुसार बगद्धारा प्रभावित ट्विटर प्रयोगकर्ताहरु १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छन् । हाल ट्विटरमा ३३५ मिलियन यूजरहरु रहेका छन् ।
यहि वर्षमा ट्विटरमा डाटासँग सम्बन्धि बग भेटिएको यो दोस्रो घट्ना हो । यसअघि पनि कम्पनीले २०१८ मईमा प्रयोगकर्ताहरुलाई पासवर्ड परिवर्तन गर्न भनेको थियो ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७५, शनिबार
स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिईने, सूचना प्रविधि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा
स्मार्ट वालिङ डिजिटल सिस्टमको शुभारम्भ, वडाका सबै सिफारिसहरु डिजिटल सिस्टमबाटै हुने